Dowladda Soomaaliya oo u digtay shirkad Shiineys ah oo macdan ka baarta Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Soomaaliya ayaa dugniin ujeedisay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha, taasoo baaritaan macadan oo sharci darro ah ka wadda Buuraha Simoodi ee gobolka Awdal ee Woqooyiga Soomaaliya, haatana hoos yimaada maamulka Somaliland ee gooni u goosadka ah.
War-saxaafadeed ay wasaaradda soo saartay waxay ugu digtay shirkada ARC, “Howlaha ARC ay sida sharci-darrada ah uga waddo Soomaaliya waxay abuurtay xasillooni-darro soo wajahday deegaannadaas, kadkib markii ay boqolaal qof oo meleeshiyaad ah shaqaaleysay si ay u ilaalinaya shirkadda iyo shaqaalaha howsha u wada, isla markasna ay barakicisay dadkii iyo duunyadii ku noolaa deegaankaas,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka wasaaaradda.
Sidoo kale, warka ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay walwal ka muujnayso sidii horayba u dhacday, in shirkadaha sharci-darrada dalka ugu aasaya badda iyo barriga Somalia.
“Xasarado iyo colaado ka dhaca gobolka Awdal si looga fogaado, wasaaradda Macdanta iyo Batroolka waxay ka dalbanaysa shirkadda ARC inay si deg-deg ah u joojiso macdan baarista sharci-darrada ah ee ay ka waddo Soomaaliya, taasoo dhalisay xasarad siyaasadeed iyo nabadgelyo-darrada ka aloosantay deegaankaas oo muddo dheer ahaa mid nabdoon,” ayay wasaaraddu tiri.
Waxaa kaloo lagu yiri qoraalka wasaaradda. “Dowladda Soomaaliya waxay ujeedinaysaa dawladda Shiinaha in shirkadaha dalkeeda laga leeyahay aysan ka qayb-qaadan sii hurinta colaadaha sokeeye ee Soomaaliya.”
Dhanka kale, waxaan uga digaynaa dhammaan shirkadaha caalamiga ah ee macdanta iyo shidaalka baara inay galaan heshiisyo sharci-darro ah oo heer-koodu ka hooseeyo hab-dhaqanka caalamiga oo ay isku dayayaan inay kula soo baxaan khayraadka Somalia, kuna qaataan si raqiis ah oo aan sharciga dalka iyo kuwa caalamiga ahba waafaqsanayn.
“Dowladda federaalka Soomaaliya mas’uul kama ahan wixii dhibaato ah ama khasaare ah ee soo gaaro shirkadaha sida sharci-darrada ah Somalia kusoo gala,” ayay mar kale tiri wasaaradda. Iyadoo shirkadda ARC ka dalbatay in ay si deg-deg ah u joojiso hawlaha ay wado, dalkana isaga baxdo.
Ugu dambeyn, wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Somalia ayaa beenisay war-bixinno been ah oo ay qoreen qaar ka mid ah Shabakadaha Soomaalida oo sheegay in dowladdu ka codsatay dalka Shiinaha inay ka caawiso barista iyo qodidda shidaalka Soomaaliya.
Gobolka Awdal waxaa maamulka Somaliland kasoo horjeestay Suldaan ka mid ah duubabka gobolkaas, kaasoo uruursaday maleeshiyaad, waxaana suldaankaas u hanjabay madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Siilaanyo.
Somaliland oo sanadkii 1991-kii ku dhawaaqday iney ka go’day Soomaaliya ayaa sheegata iney xaq u leedahay iney faa’iideysato kheyraadka dhulkeeda ku jira, ayana heshiis la gelayaan shirkado ajnabi ah.
Wafdi ka socda Golaha Amaanka Afrika oo madaxweynaha Soomaaliya kula kulmay Muqdisho